Download iyo rakibi ArcGIS Pro - Geofumadas
Mee, 2019 ArcGIS-ESRI
Download iyo galaan
Si loo fuliyo rakibidda codsiga ArcGIS Pro, calaamado dhowr ah oo hoos ku taxan waa in la tixgeliyaa.
Email: Si loo abuuro xisaab la xidhiidha ArcGIS Pro, email waa in uu noqdaa mid firfircoon, maadaama dhammaan macluumaadka loo diro tan iyada oo loo adeegsanayo badeecadda.
Isticmaalayaasha hore u haysta xisaabta ArcGIS Online, ma isticmaali karaan isla aqoonsiyada si ay u ordo ArcGIS Pro, maadaama ay yihiin gebi ahaanba xisaabaha kala duwan. Si kastaba ha noqotee, haddii koontada laga furo ArcGIS Pro, isla emailkaas oo loo isticmaalay ArcGIS Online, kuwan ayaa si toos ah loo xiriiri doonaa oo dhammaan alaabooyinka la abuuray ee ka mid ah codsiga macaamiisha ee shabakada ayaa la arki doonaa.
Shahaadooyinka: marka la samaynayo magaca isticmaalaha muhiimka ah, waa in ay ku hayaan gacanta, si ay u awoodaan inay helaan arjiga desktop.
Download, rakibid iyo helitaanka ArcGIS Pro.
Ka dib markaan tixgelinno tixraaca kor ku xusan, waxaan sii wadeynaa habka lagu soo dejinayo, rakibidda iyo helitaanka ArcGIS Pro. Tusaale ahaan, xisaabta My Esri ayaa sidoo kale loo abuuri doonaa isticmaalka ArcGIS Online.
Ka hel bogga shabakada bogga internetka ArcGIS Pro, guji doorashada ikhtiyaariga ah ee lacag la'aanta ah.
2. Habbo cusub ayaa furan halka aad ka heli karto foom kaas oo xogta la dhigo. Xogtaasi waa muhiim, tan iyo emailka la cayimay, ayaa iman doona ogaysiinta loogu talagalay abuurista koontada.
3. Dabadeed, emailka ayaa la hubiyaa oo la hubiyaa haddii fariin ficil ah uu yimaado, haddii ay sidaas tahay, guji xiriirinta isku-xirnaanta, bogga la furo, waxaa lagu dhajin doonaa magaca isticmaalaha kaas oo lahaan doona xisaabtaada ArcGIS Pro iyo sirtaada. .: user: abc123_ab / sirta: xxxxx
4. Kadibna, bog ayaa loo furay si loo aasaaso xuduudaha ururka, xogta loo baahan yahayna waxaa lagu dhejiyaa foomka iyo dhaqdhaqaaqa.
5. Si aad u sii socotid, bogga ururka horay loo abuuray waa la furay, halkaas oo dhammaan xogta la keydin doono, oo ay soo saartay hay'adda lafteeda. Sidoo kale, dhibcaha laga helo sameynta koontada ayaa la soo bandhigaa.
6. Si aad u isticmaasho isticmaalka codsiga, qaybta laysanka la maamulo ayaa ku yaal, iyo tabo cusub ayaa la furay, halkaasoo loo soo diro hal mid si loo isticmaalo dambe.
7. Marka la dhammeeyo ruqsadaha, waxaa lagu qoraa menu user, iyo xulashada My Esri ayaa ku yaal. Talaabadani waa inaad si taxadar leh u socotaa, tan iyo isticmaalka iyo furaha ereyada ee lagu dhejiyay meeshan, ha u dhigin aqoonsiga ArcGIS Pro.
8. Si aad u bilowdo, guji adigoo abuuraya xisaab furan oo cusub oo buuxi xogta foomka. Ogsoonow in magaca isticmalaha aan la mid noqon karin mid hore loogu abuuray ArcGIS Pro, waa inuu noqdaa mid cusub. .: user: abc123_ab123 / password: xxxxx
9. Kadib tallaabada hore, waxaa la xaqiijinayaa haddii email-ka ku-darsaduhu uu soo galo xisaabteyda My Esri.
10. Macluumaadka ku habboon ayaa lagu meeleeyaa foomka, iyada oo la adeegsanaayo, tiro kale oo aqoonsi ah ayaa la helayaa kaas oo ku dari doona 1200 isticmaalka qalabka internetka Esri.
11. Ugu dambeyntii, waxaad ku noqotaa bogga ururka iyo macaamiisha isticmaale, fursadda "Downloads downloads" ayaa ku yaala, tabo cusub ayaa la furay meesha aad ka soo dejisan karto codsiga.
12. Ka dib markii codsiga la soo dejiyey, waxay ku socotaa rakibaadda kombuyuutarka, aad u fudud, sida barnaamijyada kale.
13. Dhamaadka qalabka rakibida codsiga waa la furay, waxaana la weydiistaa waraaqaha aqoonsiga, qofka ugu horeysay ee la abuuray ayaa la dhigayaa (user: abc123_ab / sirta: xxxxx)
Haddii talaabooyinka si sax ah loo fuliyo, rakibidda barnaamijka ayaa ku guuleysan doonta, waxayna awoodi doonaan inay fuliyaan dhammaan noocyada hababka arjigan.
Halkan waa fiidiyoo faahfaahinaya habkan.
Post Previous«Previous #BIM - Koorsada Revit-ka Autodesk - fudud
Post Next Ka eeg isku-duwaha UTM ee Khariidadaha Google iyo Muuqaalka WaddadaNext »
Hal Jawaab oo "Soo dejiso oo rakib ArcGIS Pro"
aungkyawthu571@gmail.com isagu wuxuu leeyahay: